.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Easy Unrar Unzip & zip premium for Android
ကျွန်တော်တို့ ဆော့ဝဲလ်တွေ Upload တင်တဲ့အခါ .rar, .zip တွေနဲ့ ချုပ်ပြီးတော့တင်ပေးတာများပါတယ်။ အဲဒါကို
ဖုန်းနဲ့ ဒေါင်းပြီးတော့ Extract လုပ်ဖို့ Unrar, Unzip ဆော့ဝဲလ်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါမှ အထဲမှာထည့်ထားတဲ့
ဆော့ဝဲလ်တွေ ၊ ဖိုင်တွေကို သုံးလို့ရမှာပါ။ ခု ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ App လေးက .rar, .zip ဖိုင်တွေအားလုံးကို
မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ Extract လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆော့ဝဲလ်တွေ ၊ ဖိုင်တွေကိုလည်း Archive လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်အရမ်းကြီးတာတွေကို Part1,Part2 တွေနဲ့ နည်းနည်းစီ ခွဲလို့ရတယ် ၊ ဆက်လို့ရတယ်။ Password တောင်
ထည့်ထားလို့ ရပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် ခုတင်ပေးလိုက်တာက Premium Version လေးပါ။ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့..
Download: Easy Unrar Unzip & zip premium
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ..။ ကျွန်တော့် Blog လေးကို လာရောက် အားပေးကြတဲ့အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ။
Posted by Thurainlin at 06:52